minn minn: ​သုံး​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး ​ကို​နေ​မင်း DeskSoft Desktop Icon Toy 3.3 ​က Trial Version ​ကြီး​ဗျ ​ကျွန်​တော်​စက်​မှာ0day left ​ဖြစ်​ပြီး ​ဘယ်​လို ​ဆက်​လုပ်​လို့​ရ​သေး​လဲ ...
​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​တာ​က​တော့ trail ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . serial no. , crack , keygen ​တစ်​ခု​ခု ​ထည့်​ပေး​တတ်​ပါ​တယ် . ​အ​ခု​ထပ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ . keygen ​ထည့်​ပေး​ထား​တာ ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​ဖိုင် ​မ​ဖြေ​ခင် ​တင်​ထား​တဲ့ anti virus program ​ကို​တော့ disable ​ပေး​ထား​ဖို့​လို​ပါ​တယ် . ​မ​ဟုတ်​ရင် ​ကျွန်​တော်​ထည့်​ပေး​တဲ့ keygen ​ကို ​အစ်​ကို​တွေ့​ရ​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး .. keygen ​ဆို​တာ​နဲ့ anti virus ​တွေ​က ​တစ်​ခါ​တည်း ​သတ်​ပြီး​သား​ပဲ​ဗျ . ​ဗိုင်း​ရပ်စ် program ​တွေ​က virus ​ကို​သာ ​မ​သတ်​နိုင်​ရှိ​ရော့​မယ် . keygen ​ဆို​ရင်​တော့ ​ဘယ် antivirus program ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​သတ်​နိုင်​ကြ​တယ်​ဗျ . program ​ရေး​တဲ့​သူ​တွေ​က ​အဲ့​လောက်​ထိ​ကို ​တော်​တာ .
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download nyinaymin.net
ral March 24, 2011 at 7:14 PM
​အစ်​ကို​လည်း​တစ်​မျိုး​တည်း​ကို​ထပ်​ကာ​ထပ်​ကာ​ဖြေ​နေ​ရ​တာ ​တော်​တော်​ပင်​ပန်း​ရော့​မယ်။​ကု​သိုလ်​ရ​တာ​ပေါ့​ဗျာ။​စိတ်​ရှည်​တာ​ကော​တာ်​တာ​ကော ​စေ​တ​နာ​ပါ​တာ​ကော​အ​ချိန်​ပေး​နိုင်​တာ​ကော​တ​ကယ်​လေး​စား​တယ်​ဗျာ။​ကျ​နော်​ဆို​အစ်​ကို့​ဆိုဒ်​ကို​တ​နေ​ကုန်​မွှေ​တာ​မ​ပြီး​ဘူး​ဗျာ။​နှံ့​အောင်​မ​သွား​နိုင်​ဘူး။​တွ့​လိုက်​ဒေါင်း​လိုက်​နဲ့​အ​ချိန်​ကုန်​ကုန်​သွား​တာ။​အ​များ​ကြီး​ဒေါင်း​သွား​တယ်။ ​အဲ ​ကွန်း​မန့်​ပေး​ဘို့​ပျင်း​တာ​တော့ ​တ​ကယ်​တောင်း​ပန်​တယ်​ဗျာ။ ​ကွန်း​မန့်​ပေး​ချင်​ပါ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အဲ့​ကွန်း​မန့်​ပေး​ဘို့​အ​ရေး verification word ​တွေ​လိုက်​ရိုက်​နေ​တာ​ကို​ပျင်း​တာ။ ​လို​ချင်​တာ​ရ​တော့ ​ပေး​တဲ့​သူ​ကို​မေ့​ချင်​တယ်​ပေါ့​ဗျာ။ ​ဟီးး